Akụkọ kachasị ọhụrụ banyere Federal Anti-Robbery Squard si Nigeria & ụwa | TAA
Onye isi agha nke South Sudan, James Ajongo nwụrụ n'Ijipt
Home Tags Squard nke Federal Anti-Robbery Squard
Squard nke Federal Anti-Robbery Squard
Ndị uweojii na-akwado njide nke onye na-egbu egbu
Iwu ndị uwe ojii nke Plateau ahụ kwadoro jidere onye a na-enyo enyo na-egbu egbu, Mr. Ifeanyi Dike, onye gbapụrụ n'ụlọ mkpọrọ na Ụlọ Ọrụ Nchọpụta Criminal (CIB), na Port Harcourt, Rivers State.
Onye isi agha nke South Sudan Gen. James Ajongo nwụrụ na Cairo na Friday mgbe ọrịa nrịanrị dị obere, onye ọnụ na-ekwuru ọchịchị bụ Michael Makuei Lueth kwuru.
Minista ego, Kemi Adeosun, kwuru na Naijiria achọghị Banye Ụwa iji nyochaa ụgwọ ya.
Diego Simeone: Arsenal ike n'akụkụ ekpe ke Europa Njikọ
Atletico Madrid nchịkwa Diego Simeone na-ekwu na ndị òtù ya na Europa Njikọ ogosi na Arsenal bụ "50-50 tie" na akụkụ Arsene Wenger bụ "ike n'akụkụ" fọdụrụ na draw.
Senate na-agbada iwu mmeghari iwu nke mmeputara ntuli aka
Ụlọikpe ahụ emeela ka BillN BillX Bill Amendment Bill, nke na-achọ ịmeghachi ntuli aka n'usoro ntuli aka na ntuli aka.
Mmadụ asaa ndị mkpọrọ nwụnahụrụ, 17 merụrụ ahụ n'agha na South Carolina n'ụlọ mkpọrọ
Otu onye na-ekwuchitere ụlọ mkpọrọ dị na South Carolina kwuru na ndị mkpọrọ asaa anwụọla, na ndị 17 ndị ọzọ chọrọ nlekọta ahụike mgbe ha jesịrị ịlụ ọgụ n'ụlọ mkpọrọ kachasị elu.
Ndị uweojii kwuru na ha na-agba, na-emerụ mmadụ abụọ ahụ agbamakwụkwọ na Imo
Ndị uwe ojii abụọ kwuru na ha gbagburu ma merụọ mmadụ abụọ na Anara, Isiala Mbano Local Government Area nke Imo State na Sunday n'oge ememe agbamakwụkwọ.
Ndị uweojii na-ahụ maka ndị ndu ọjọọ, ndị 20 ndị ọzọ na Zamfara
Iwu ndị uweojii na Zamfara jidere onye ndú nke ndị omempụ mara ọkwa a maara dị ka "Sara-Suka" yana ndị òtù 20 ọzọ.
France ka ị na-amị mkpụrụ maka ịṅụ mmanya
John Terry bụ onye na-eme njem na Aston Villa na-enyo enyo na ọ ga-agbaji metatarsal
Enweghị m ike icheta ego nyere Olisa Metuh -...
Ihe kpatara NYSC ji dị mkpa - onye nhazi
Ndị uweojii na-anọrọ ndị mmadụ anọ, weghachite mgbapụta N800,000
Senate na-akwado ndi isi ochichi Buhari ka ha buru isi NHRC, NERC